သင်ဘယ်လိုဘဏ္bubာရေးပူဖောင်းထုတ်လုပ်သလဲ? | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
ဟိုဆေး recio | | အကြပ်အတည်း, အထွေထွေစီးပွားရေး
ဘဏ္severalာရေးပူဖောင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လပေါင်းများစွာ ပိုမို၍ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရသည့်အသံများကသတိပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောဘဏ္agentsာရေးအေးဂျင့်များကအလွန်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသုံးအနှုန်းသည်အများပြည်သူမသိသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ဒီကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ကွင်းကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများ၏ဆွဲငင်အားနှင့်အတူ လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်ကြ၏။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက၎င်းသည်စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကဏ္aspectsများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုမှသည်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထိဖြစ်သည်။
ဘဏ္bubာရေးပူဖောင်း၏ရိုက်ခတ်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်မစတင်မီ၎င်း၏အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုအတည်ပြုရန်မှာအကောင်းဆုံးသောအရာမရှိပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီစီးပွားရေးမြင်ကွင်းဟာအခြေခံအားဖြင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုပြောတာထက်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုပါ ၀ င်ပါတယ် ထင်ကြေးနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်ကို။ ၎င်းသည်အိမ်ခြံမြေ၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းတရားများနှင့်မတူကွဲပြားသည့်သဘောသဘာဝများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ဤအထူးစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္processesာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
ယင်း၏ပြင်းထန်မှုအားလုံးကိုနားလည်နိုင်ရန်ကိုင်တွယ်ရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှု၏သားကောင်ဖြစ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအချို့သောရှယ်ယာများသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာမြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမမေ့နိုင်ပါ။ ၎င်း၏အရှိဆုံးချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအရေးကြီးသောပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည် ဒါခေါ်ထင်ကြေး၏လိမ်။ ၎င်း၏ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကားအဘယ်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ကံမကောင်းတာကယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်။
1 ပူဖောင်း: ဘယ်ဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်?
ဘဏ္bubာရေးပူဖောင်းသည်မည်သည့်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွင်မဆိုပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ဒီသဘောနဲ့ ချွင်းချက်မရှိလူတန်းစားရှိပါတယ် မကြာသေးမီနှစ်များ၏အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အတည်ပြုအဖြစ်။ သူတို့ထဲမှမည်သည့်ဆိုးကျိုးကိုမဆိုမကောင်းသောအရာဟုယူမှတ်သင့်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုယူဆောင်လာနိုင်သည် ကြွေးမြီမှဆင်းသက်လာသောရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ပူဖောင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရာများရှိနိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင်သူတို့သည်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ စီးပွါးရေးကြည့်ရှုသူများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်မှားယွင်းသောဖြစ်ခြင်းအထိ။ အဖြစ်မှန်အနေဖြင့်မှန်ကန်စွာရှင်းပြရန်နှင့်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီယေဘူယျမြင်ကွင်းကနေသံသယရှိစရာမလိုပါဘူး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှားစရာလမ်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်းများတွင်သဘာဝအပူလွန်ကဲမှုကြောင့်အချို့အချိုးအစားမညီမျှသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ ထိခိုက်နစ်နာသောဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြည်သူ့ကြွေးမြီသို့မဟုတ်မည်သည့်အဖိုးတန်သတ္တုများပင်ဖြစ်ပါစေ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလုပ်ငန်းများ၌ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရာထူးကိုအလျင်အမြန်ပိတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့ရဲ့မြို့တော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုဆုံးရှုံးနိုင်လို့ပါပဲ။
ဘဏ္bubာရေးဆိုင်ရာပူဖောင်းဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်အတူ ပို၍ သိသာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိရင်ရောင်း ၀ ယ်မှုတိုးလာခြင်းကြောင့်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာအချိုးအစားမညီမျှမှုနဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာရှည်စွာတိုးပွားလာလို့ပါ။ ၎င်း၏တန်ဖိုးကို skyrocket။ သူတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ရှိသေးသော၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အဆင့်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်များရှိလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါကဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဤဆောင်းပါး၏ရှင်းလင်းချက်များတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်အလွန်ထူးခြားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီမြင်ကွင်းသည်သင်နောင်တွင်ရောင်းရန်ကူညီနိုင်ပြီးဤနည်းအားဖြင့်ဤမြင်ကွင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်အရင်းအနှီးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်နေစဉ်, after effect ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စျေးနှုန်းဖြစ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် ထင်ကြေး၏အရာဝတ္ထု သူတို့ထိုအချိန်ကသူတို့ရရှိသင့်သောတကယ့်တန်ဖိုးနှင့်မဝေးပါ။ အလျင်အမြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာဈေးနှုန်းသည်လေထုထဲတွင်ခုန်ချလျက်ပြောနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိခိုက်နိုင်သည့်ကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူ။
စျေးနှုန်းများနိုင်ပါတယ် 50% အထိလျှော့ချ သို့မဟုတ်ပင်ပိုမိုပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်အတူသူတို့အကြီးအအငြိုးတကြီးနဲ့နှင့်အတူပြိုကျအတူတူပင်အဘယ်အရာကိုအတူ။ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောအခြားဘဏ္areာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်လုံးဝပုံမှန်မဟုတ်သည့်သုညတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်။ ဤသည်မှာအာမခံအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်ဘဏ္assetsာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်နေရာချထားခံရနိုင်သည့်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးနီးပါးကိုသင်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းသင်မမေ့နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်ဤထူးခြားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုခေါ်ဆိုခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ရိုက်သံ နှင့်ရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ပင်အထူးသဖြင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၏ကဏ္ aspects အားလုံးတွင်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်တိုင်းပြည်၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်အထိဖြစ်သည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ရှိနေခြင်းကိုသင်ရှောင်ရှားသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်သည်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်ကိုမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ထက်ပို။
သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ထိုလှုပ်ရှားမှုများသည်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာဖြင့်ပင်အကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၏မူလအစဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဥပမာများရှိသည် 30 ၏ဂရိတ်စီးပွားပျက်ကပ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏လူသိနည်းမှုနည်းသောအိမ်ခြံမြေပူဖောင်းသည်ဤအန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှု၏ဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုများစွာဖော်ပြသည်။ ၎င်း၏အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုတစ် ဦး ကျဆင်းခြင်းထက်အများကြီးပို။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချက်ကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပြိုလဲသွားစေနိုင်တယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနည်းလာခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများပြားလာခြင်း၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာငွေစျေးနှုန်း။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အုတ်မြစ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ချေအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရယနေ့ခေတ်တွင်အများပြည်သူဆိုင်ရာကြွေးမြီများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသေးစားနှင့်အလတ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ဘဏ္financialာရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ၄ င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၄ င်းတို့၏ ၀ င်ငွေ၏ပုံသေ ၀ င်ငွေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအနိုင်ရတာထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်တွင်အိမ်ရာစျေးနှုန်းနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမမြင်ရသောအဆင့်များသို့ထပ်မံမြင့်တက်နေပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းများကိုဤပုံပျက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်ဤလူတန်းစားအဆင့်အတန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းအတွက်ငွေအမြောက်အများရှာဖွေနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ သူတို့ကဒီကြီးလေးတဲ့စွန့်စားမှုကိုလုပ်နေတယ် သတ္တိမရှိဘူး ဤအဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ပူဖောင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အလားတူဖြစ်စဉ်သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ပိုင်ရှင်အသစ်ကမျှော်လင့်မထားသည့်အဆင့်အထိအိမ်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားသည့်နေရာ။
စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာသုံးသပ်သူများကဤဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းသတိပေးနေကြသည်။ ဒီနိဂုံးချုပ်ဖို့အတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သည် ငှားရမ်း ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်း။ ကြီးမားသောမြို့တော်များတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည် စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စျေးနှုန်းများ ဖြစ်နိုင်သောနှိုင်းယှဉ်၏ကောင်းတစ် ဦး အစိတ်အပိုင်းအတွက်။ ဤသည်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်စျေးနှုန်းများပူနွေးလာမှုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ စပိန်စီးပွားရေးအတွက်အခြေခံကျသောကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းပေါ်ပေါက်လာပါကစပိန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ဘဏ္bubာရေးပူဖောင်း၏ဆိုးရွားလှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရောက်ရှိမီယင်း၏ဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်အစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြtheနာကိုကိုင်တွယ်ရန်, ဥရောပဗဟိုဘဏ်မှအနေအထား၌တည်ရှိ၏ အတိုးနှုန်းမြှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကြမ်းပြင်များ၏စျေးနှုန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ ဒီထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောစီးပွားရေးအေးဂျင့်များ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားနိယာမနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံအားလုံး၏စီးပွားရေးအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်နိုင်ချေများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအစိုးရများကကုန်ကျစရိတ်မည်မျှကိုမဆိုတားဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သေစေနိုင်လို့ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဤပြproblemsနာများသည်အကြိမ်ရေအနည်းငယ်နှင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ချေ။ မဟုတ်ပါကဆန့်ကျင်။ ၎င်းတို့သည်ယာယီကာလများသာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » သင်ဘယ်လိုဘဏ္bubာရေးပူဖောင်းထုတ်လုပ်သလဲ?
စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုတွင်ငွေစုရန်အကြံဥာဏ် ၁၀ ချက်